Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Cali Khaliif Galeyr oo qarka u saaran inuu ka mid noqdo maamulka Somaliland
August 19 2017 01:00:57
Cali Khaliif Galeyr oo qarka u saaran inuu ka mid noqdo maamulka Somaliland
Madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeyr ayaa qarka u saaran inuu ka mid noqdo maamulka Somaliland oo maalmahan uu wadahadalo kula jiray.
Wada hadalka Somaliland iyo Cali Khaliif ayaa ka bilowdey degmada Caynabo ee gobolka Sool, waxaana Somalailand uga qeyb galaya ergooyin isugu jira Wasiiro iyo oday dhaqameedyo.
Wasiirka Warfaafinta Somaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid ayaa BBC u sheegay in wadahadalka labada dhinac uu meel wanaagsan marayo, ajendaha la wada hadlayana uu yahay sidii Cali Khaliif Galayr iyo saaxiibadiis ay uga mid noqon lahaayeen maamulka Somaliland.
Saxardiid ayaa intaa ku daray in wada hadalkan marka uu dhamaado ay beesha Dhulbahante u qabanayaan shir ballaaran oo uu horey u iclaamiyey Madaxweynaha Somaliland.
Cali Khaliif ayaa waraysi uu bixiyey maalmo ka hor aan meesha ka saarin inuu ka mid noqon karo maamulka Somaliland oo sheeganaya inuu ka go’ay Soomaaliya inteeda kale.
In Cali Khaliif uu ku biro Somaliland ayaa waxaa sii xoojinaya maamukiisa oo aqoonsi ka waayey dowlada Soomaaliya, iyadoo doorashada xildhibaanada cusub ee ka soo jeedo degaanada Khaatumo la hoos geeyey maamulka Puntland.
Maamulka Puntland oo sheegta degaanada khaatumo ayaa culeys weyn ku saaray dowlada Somalia in la go'doomiyo maamulka khaatumo ee Cali Khaliif madaxweynaha ka yahay
Cali Khaliif oo sheegan jiray inuu difaacayo midnimada Somalia ayaa haddii uu ku biiro maamulka Somaliland waxaa macnaheedi noqonayaa inuu isbedelay uuna qaatay siyaasada kala go'a ee Somaliland ay wadato.
· Caydiid on August 13 2016 ·